Properties for Sale in Kyeemyindaing - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Properties for Sale in Kyeemyindaing
အုန်းပင်လမ်း တိုက်ခန်းမြေညီထပ်နှင့်ပထမထပ် ၂ ခန်း ရောင်းမည်
Ad Number S-10044894
(30'x40')အကျယ်၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ အထက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမ၊ စီးပွားရေးလုပ်ရန်နေရာအလွန်ကောင်း...
Ad Number S-10044051
Ad Number S-10041858
☃️☃️ ##ကြည်မြင့်တိုင်မြို့နယ် နေရာကောင်း Sinmalite Business Tower တွင် ကွန်ဒို အခန်းကျယ်...
Ad Number S-10035265
အခန်းသစ်နဲ့ အသင့်နေလိုသူတွေအတွက် ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းအနီးမှာရှိတဲ့ Master Bedroom ( ၁...
Ad Number S-10031156
Myanmar First Real Estate Close
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် Car parking ပါ ၄လွှာ (Lift ပါ) Mini Condo အရောင်း
Ad Number S-10028363
Myint Zu Realestate Service Close
ဉ ယျ ဉ္ လမ်း ၊အပေါ်လမ်း မြေကွက်ရောင်းမည်
Ad Number S-10024435
Ad Number S-10024331